मुख्यमन्त्री बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने तीनजना मन्त्री पद 'उपहार' ! : RajdhaniDaily.com -
Home Breaking News मुख्यमन्त्री बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने तीनजना मन्त्री पद 'उपहार' !
काठमाडौं । मुख्यमन्त्री बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का तीन प्रदेशसभा सदस्यले उपहार स्वरुप मन्त्री पद पाउने भएका छन् ।
उनीहरुको आजै मन्त्री पदको सपथ हुने भएको छ । सोमबार माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएर मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । प्रस्तावमा कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १७ र जसपाका ५ सांसदको हस्ताक्षर थियो । तर अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकामध्ये विजय यादव, सन्तोष पाण्डे र सुमन रायमाझीले सरकारलाई समर्थन गरेको र मन्त्री बन्न तयार भएको स्रोतको दाबी छ ।
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - February 7, 2020 0
काठमाडौं । कोरोना भाइरस प्रभावित चीनको वुहान सहरमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन अझै केही समय लाग्ने भएको छ । बुहानबाट फर्काउने नेपाली नागरिकलाई राख्ने...
भर्खरै प्रशान्त वली - April 17, 2021 0
प्रदेश ३ राजधानी समाचारदाता - March 4, 2020 0
Breaking News राजधानी समाचारदाता - June 20, 2020 0
कोरोना भाइरस संक्रमण प्रभाव : कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने तयारी
फैलिन सक्ने भन्दै उच्च सतर्कता काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डव्लु.एच.ओ) ले नेपाललाई कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन सक्ने अति उच्च...
प्रदेश ६ राजधानी समाचारदाता - July 12, 2020 0